ZNAPS, oo ah isku xiraha birlabta si uu kaaga qaado iPhone iyo iPad | Wararka IPhone
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee lagu aqoonsado MacBooks muddo sanado ah shaki la'aan waa isku xiraheeda MagSafe. Ilaa 2006 Isku xiraha magnet wuxuu u adeegay si looga fogaado shilal badan oo laptops Apple ah, iyo sidoo kale in la fududeeyo isku xirka fiilada lacag bixinta, taas oo kaliya iyadoo loo dhawaado meeshii u dhiganta isku xirta si sax ah Sababta ay Apple u dooran weyday nidaamka lacag bixinta ee la midka ah aaladaha mobilada waa wax ay yar yahiin kuwa fahamsan, laakiin hadda waxaa mahad iska leh mashruuc laga heli karo barxadda Kickstarter ee dadka badan ku uruuriyaan waxaad ku raaxeysan kartaa isku xirahan taleefankaaga iPhone ama iPad, magaciisuna waa ZNAPS.
Waa qalab aad u fudud: isku xira ku habboon isku xidhka hillaaca ee fiilada iyo mid kale oo la geliyo isku xiraha iPhone-ka, oo si magnetik ah isugu xiran. Sidan ayaad u isticmaali kartaa xarigga danab ee Apple-ka asalka ah howlaha uu qorsheeyey, isku dheelitirid iyo lacag-bixin labadaba, laakiin si macno leh ugu biiraya iPhone-kaaga, iPad-ka iyo iPod Touch. Isku xiraha la geliyay qalabka waa mid aad u yar oo la jaan qaadi kara kiisaska intiisa badan wuxuuna daboolayaa iPhone ama iPad, sidoo kale wuxuu u adeegi doonaa inuu ka ilaaliyo isku xirnaanta danabka boodhka ama xitaa biyaha. Gabi ahaanba waa la beddeli karaa waxayna sidoo kale leedahay leydh taas oo muujinaysa inay lacag ku shubanayso.
ZNAPS mashruuc horeyba uga dheeraaday hadafkii loo qoondeeyay inuu horay ugu socdo, laakiin waad wali kaqeyb qaadan kartaa hel isku xidhkaaga magnetka qiyaastii $ 11 (oo lagu daray $ 3 kharashka dhoofinta) ama ka badan, waxay kuxirantahay tirada isku xirayaasha aad rabto. Dabcan, haddii aysan wax dhibaato ah ku qabin Apple iyo shatiyadiisa, maaddaama tiknoolajiyadda MagSafe ay rukhsad u tahay Apple, waxayna noqon kartaa in caannimada qalabka ay ka dhigeyso qareennada Cupertino inay tallaabo ka qaadaan arrinta. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah ama aad kaqeybqaadato mashruuca, guji kaliya xidhiidhkan. Anigu mar hore ayaan dalbaday tayda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » ZNAPS, oo ah isku xiraha birlabta si uu kuugu soo dallaco iPhone iyo iPad
Tani waxay noqon kartaa iPhone 7 ee aan ku arki doonno wax ka yar sannad